I-BAD63-Uthotho lwezibane ze-LED ezibonisa ukuqhuma-ubungqina obuphezulu bokugcina amandla (ukukhanya kweqonga)
1. Isetyenziswa kakhulu kwiindawo ezinobungozi ezifana nokuphononongwa kwe-oyile, ukusulungekiswa, iikhemikhali, umkhosi kunye namaqonga e-oyile ase-Offshore, iitanki ze-oyile, njl njl. Ukukhanyisa ngokubanzi kunye nokusetyenziswa kokukhanyisa komsebenzi;
7. Ifanele indawo zobushushu obuphantsi obungaphezulu kwe -40 °C.
2. Ulwakhiwo olunamalungelo awodwa omenzi we-multi-cavity, i-cavity yamandla, umthombo wokukhanya kunye ne-wiring cavity Imizimba izimele.
3. Yamkela isigqubuthelo esicacileyo seglasi epholileyo yeborosilicate ephezulu, isigqubuthelo esicacileyo se-atomization anti-glare uyilo, inokumelana nempembelelo yamandla aphezulu, ukudityaniswa kobushushu, kunye nokuhanjiswa kokukhanya ukuya kuthi ga kwi-90%.
5. Itekhnoloji yamandla eqhubela phambili, igalelo lombane obanzi, ngokuqhubekayo, ukukhuselwa kokhuseleko lwesekethe evulekileyo, ukukhuselwa kombane omfutshane, ukukhuselwa kokunyuka, kunye neminye imisebenzi.
6. Qwalasela iimodyuli ze-LED zamazwe ngamazwe, iteknoloji yokusabalalisa ukukhanya okuphambili, ukukhanya okufanayo kunye ne-soft, isiphumo esikhanyayo ≥120lm / w, ukunikezelwa kombala ophezulu, ubomi obude, uhlaza oluhambelana nokusiNgqongileyo.
7. Umbhobho womoya okhupha ubushushu kunye nesakhiwo sokukhokela umoya ukuqinisekisa umthombo wokukhanya kwe-LED Ubomi obulindelekileyo.
1. Khetha nganye nganye ngokwemigaqo kwintsingiselo yeenkcazo zemodeli, kwaye wongeze uphawu lobungqina bokudubula emva kwentsingiselo yenkcazo yemodeli.I-embodiment ethile yile: "imodeli yemveliso - ikhowudi yenkcazo + uphawu lobungqina bokuqhuma + ubuninzi bomyalelo".Umzekelo, ukuba isibane seplatifti esisingqinisiso sokudubula esingu-30W siyafuneka kwaye inani leeseti ezingama-20, lo myalelo uthi: “Imodeli: BAD63-Specification: A30P+Ex d mbIIC T6 Gb+20″.
FCD63 series Explosion-high-efficiency en...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfuziselo 1. Iqokobhe le-aluminiyam ye-alloy die-casting, umphezulu utshizwe nge-electrostatically, kwaye inkangeleko intle.2. Ngomsebenzi wokukhanya okrelekrele, inokuqonda ukuba umzimba womntu uhamba ngokokukhanya okusetiweyo emva kokuba umzimba womntu uhambe ngaphakathi kuluhlu olujongwe.3. Ubume obucwengileyo obungangenwanga ngumlilo obunemingxuma emithathu, obulungele irhasi eqhumayo kunye nemekobume yothuli olunokutsha, egqwesileyo ekusebenzeni kobungqina bokudubula kunye nokusebenza kwefotometric.4. Amabala...
FCT93 series Explosion-proof LED Lights
Iimpawu zoMfuziselo weModeli 1. Iqokobhe leAluminiyam yeAluminiyam yokuphosa, umphezulu wokutshiza i-electrostatic, inkangeleko entle 2. Uyilo lwemodyuli olunogqabhuko lwe-LED olulodwa, lunokukhethwa ngokweemfuno zesibiyeli sesibane esikhethekileyo okanye umkhono wokudibanisa, udityaniswe ngokungenasizathu. izibane ezikhanyayo, izibane okanye izibane, ukwenzela ukulungelelanisa iimfuno zokukhanyisa kwiindawo ezahlukeneyo, ukulungiswa okufanelekileyo kunye nokuphucula.3. Uyilo lwesibane sesitalato ngokuhambelana ne-roa yasedolophini...
Uthotho lwe-IW5510 oluphathekayo olunoqhushumbo kwi...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. Ixesha lokusebenza lide, ukukhanya okukhanyayo kunye nokukhanya okusebenzayo kwexesha eliqhubekayo lokusebenza kwiiyure ze-10, iiyure ze-20 okanye ngaphezulu.2. Iklasi yokukhusela i-Inclosure IP66, ukuqinisekisa ukuba izibane kwiindidi zeemeko ezinzima kunye nokusetyenziswa okuthembekileyo.3. Iqokobhe ukusetyenziswa kwezixhobo zeplastiki bullet-proof, amandla aphezulu, ukumelana impembelelo elungileyo.4. Ubunzima bokukhanya, bunokubanjwa ngesandla, ukuxhoma, i-buckle kunye nezinye iindlela eziphathekayo, ngelixa i-adsorption magnetic, kulula ukuyisebenzisa.5. Umsebenzisi-friendly batt...
dYD series Explosion-proof(LED) fluorescent isibane
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. I-enclosure ibunjwe yi-alloy ye-aluminium yamandla aphezulu ngexesha elinye.Umphandle wayo utshize ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudubula kuqhume ngesantya esiphezulu.Kukho izinto eziluncedo kwindawo ebiyelweyo: ulwakhiwo oluqinileyo, izinto ezixineneyo eziphezulu, ukomelela okukhulu, imisebenzi emihle yokuthintela uqhushumbo.Inoncamelelo olomeleleyo lweplastiki yomgubo kunye nokusebenza okukhulu kwe-anticorrosive.Umphandle ucocekile kwaye umhle.2. Inesakhiwo selungelo elilodwa lomenzi wechiza kwaye inokuphendula...
I-BAD63-Uluhlu lwe-Solar-proof-proof light street light
Iimpawu zeMizekeliso yeMizekeliso 1. Izibane zesitalato zenziwe ngeemodyuli zelanga, izilawuli zezibane zesitalato ezikrelekrele, (ezingcwatyiweyo) iibhetri ezingakhathalelwanga, izibane ezingaqhushumbayo ze-BAD63, iipali zezibane kunye nezinye izinto.Iimodyuli zelanga zihlala ziyi-DC12V, i-DC24 iipleyiti ze-silicon ze-monocrystalline okanye iiseli ze-silicon ze-polycrystalline zelanga kuchungechunge kunye nokuhambelana.Zivalwe ngokuqinileyo ngeglasi epholileyo, i-EVA kunye ne-TPT.Isakhelo se-aluminiyam ye-alloy ifakwe ngeenxa zonke, enomoya onamandla kunye nesichotho ...
Uluhlu lwe-BSD4 Isibane seprojekthi esinobungqina bokudubula
Iimpawu zoMfuziselo weModeli 1. I-enclosure ibunjwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy ngexesha elinye, elinamandla amakhulu, imisebenzi emihle yokuqhuma.Umphandle wayo utshize ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudubula kuqhume ngesantya esiphezulu.Inoncamelelo olomeleleyo lweplastiki yomgubo kunye nokusebenza okukhulu kokuchasana nokudleka.Izibophelelo zangaphandle zenziwe ngentsimbi engenasici.2. Inokujikelezwa i-360 ° ngokuthe tye kwaye ilungiswe kuluhlu lwe-+90 °～－60 °.3. Ulwakhiwo olugqalileyo lukwi...